IR Thermopile Sensor ho an'ny fitiliana ny mari-pana amin'ny vatana STP9CF55C
Ny sensor STP9CF55C thermopile infrared (IR) ho an'ny fandrefesana ny mari-pana tsy mifandray dia sensor thermopile
famolavolana fanelingelenana anti-elektromagnetika, STP9CF55C dia matanjaka amin'ny karazan-tontolo fampiharana rehetra.
Thermopile IR Sensor tsy mifandray amin'ny fanaraha-maso ny mari-pana STP9CF59
Ny sensor infrared thermopile STP9CF59 ho an'ny fandrefesana ny mari-pana tsy mifandray dia sensor thermopile
famolavolana fanelingelenana anti-electromagnetic, STP9CF59 dia matanjaka amin'ny karazan-tontolo fampiharana rehetra.
Sensor infrareda thermopile avo lenta tsy misy ifandraisany amin'ny refin'ny mari-pana STP9CF59H
Ny sensor infrared thermopile STP9CF59H ho an'ny fandrefesana ny mari-pana tsy mifandray dia sensor thermopile
famolavolana fanelingelenana anti-electromagnetic, STP9CF59H dia matanjaka ho an'ny tontolo tontolo fampiharana rehetra.
Ny mari-pana momba ny vatan'ny dizitaly dia tsy refesi-maso infrared thermopile sensor STP10DF55
Ny sensor thermopile infrared STP10DF55 ho an'ny fandrefesana ny mari-pana tsy mifandraika dia sensor thermopile manana voltase signal output mifanitsy amin'ny herin'ny taratra infrared (IR). Noho ny famolavolana fanelingelenana anti-electromagnetic, STP10DF55 dia matanjaka amin'ny karazana tontolo iainana fampiharana.
Ny STP10DF55 misy karazana chip sensor sensor thermopile CMOS vaovao dia manana fahatsapana tsara, coefficient ny mari-pana kely amin'ny mari-pahaizana ary koa ny famokarana avo sy ny fahamendrehana. Ny puce referrer thermistor avo lenta dia natambatra ihany koa ho an'ny fanonerana mari-pana manodidina.
Fitaovana IR mitaingina ambonin-tany ho an'ny tsy fitadiavana mari-pana momba ny vatana STP10DF55C-AD
Ny STP10DF55C-AD misy karazan-tsivana thermopile CMOS mifanentana karazana vaovao dia misy fahatsapana tsara, coefficient ny maripana kely amin'ny fahatsapana ary koa ny reproducibility ambony sy ny fahamendrehana. Ny fonosana TO-Can etona ambony dia raisina ho an'ny STP10DF55C-AD, izay mahatonga ny sensor hanaraka ny haitao. Ankoatr'izay, ny marika eo ambanin'ny STP10DF55C-AD dia miantoka ny fahamendrehan'ny IR sensor. Ity famolavolana manokana ity dia manatsara ny famerenana ny làlan'ny optika IR. Noho izany, ny mari-pana momba ny maripana tsy misy fifandraisana dia omen'ny STP10DF55C-AD.
Detection Temperature Detection Thermopile IR Sensors tsy misy fifandraisana amin'ny Optical Lens STP9C9L3
Ny sensor thermopile infrared STP9C9L3 ho an'ny fandrefesana ny mari-pana tsy mifandraika dia sensor thermopile manana voltase signal output mifanitsy amin'ny herin'ny taratra infrared (IR). Noho ny famolavolana fanelingelenana anti-electromagnetic, STP9C9L3 dia matanjaka amin'ny karazana tontolo iainana fampiharana. Ny fantsom-pikantsary miharo zoro optika dia manatsara ny tahan'ny DS an'ny sensor hatramin'ny 8: 1 amin'ny alàlan'ny famolavolana optika optika. Ny puce referrer thermistor avo lenta dia natambatra ihany koa ho an'ny fanonerana mari-pana manodidina.
Famantarana ny maripana tsy misy fangarony olona tsy mifandray amin'ny fandrefesana Thermopile IR Sensor STP11DF55C
Ny sensor thermopile infrared STP11DF55C ho an'ny fandrefesana ny mari-pana tsy mifandray dia sensor thermopile izay manana voltase signal output mifanitsy amin'ny herin'ny taratra infrared (IR). Noho ny famolavolana fanelingelenana anti-electromagnetic, STP11DF55C dia matanjaka amin'ny karazana tontolo iainana fampiharana.
Ny STP11DF55C misy karazana fantsom-pandrefesana thermopile CMOS vaovao dia manana fahatsapana tsara, coefficient ny mari-pana kely amin'ny mari-pahaizana ary koa ny fitomboana ambony sy ny fahamendrehana. Ny puce referrer thermistor avo lenta dia natambatra ihany koa ho an'ny fanonerana mari-pana manodidina.